Zawgyi-Mobile Font For All Mobile Devices (Update) - MYSTERY ZILLION
Zawgyi-Mobile Font For All Mobile Devices (Update)
March 2012 edited April 2012 in Android Development
ကျနော် ပထမ ဒါကို ဇော်ဂျီတူးလို့အကြမ်းဖျင်းနာမည်ပေးပီး ပို့တင်ခဲ့တယ်..ကျနော် နားမလည်တဲ့ အပိုင်းကို တစုံတယောက်စီက အကြံလေးများရမလားဆိုပီး စာရေးခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ ဘာမှမပြော ဘာမှ မဆွေးနွေးတော့ မိမိဘာသာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်တာကိုပဲ ရွေးချယ်ပီး လုပ်လိုက်ပါတယ်။ဖုန်း အားလုံး အတွက် ဘာလို့ ကျနော်ပြောရတာလဲဆိုတော့ ဆိုနီမှာ သိပီးသား မြန်မာစာလုံးတွေမြင်ရတာ သိပ်မကောင်း။တခြားဖုန်းတွေမှာတော့ မြန်မာစာလုံး ဘာမှ ပြသာနာမရှိ။သို့သော် အင်္ဂလိပ် အက္ခရာစာလုံးတွေက အ၇မ်းရိုးတယ်၊ကြီးတယ် စမတ်မကျဘူးလို့ထင်တယ်။စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ မလိုက်ဖက်ဘူးလို့လည်းမြင်မိတယ်။အဲသာကြောင့် ကျနော့်မျက်စိထဲ တွေ့မိတဲ့ SonySketchEF font ကိုဇော်ဂျီရဲ့ မြန်မာ အက္ခရာတွေ ယူပီး SonySketchEF font လေးထဲ ပြောင်းထည့်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်။ဒါကြောင့် ဖုန်းအားလုံးအတွက် ယခု ကလိလိုက်တဲ့ Zawgyi-Mobile font ကို ဇော်ဂျီကို ငြီးငွေ့တယ်၊အသစ်အဆန်းကို သုံးချင်တဲ့ မိတ်ဆွေအတွက် ကျနော် တင်ပေးလိုက်မယ်။အ၇င် ဇော်ဂျီဝမ်းထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ကျနော် ပြောရဲပါတယ်။ဝါဒနာပါရင် စမ်းကြည့်ပါ။မကောင်း၇င် ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါ။ဖုန်းအတွက်လဲ ဘာထိခိုက်မူမှ မရှိပါ။
download Zawgyi-Mobile font
ဒါလေးကတော့ sony ericsson android phones အသုံးပြုသူများအတွက်
Zawgyi-One အတိုင်းလေးပဲ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် ဒါလေးသုံးပါ။
လိုအပ်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပီး မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း...
bal mar download ya mar laeako
@manorherry , please use unicode or english.
for download, send email to [email protected]
please wait.I'll upload soon
DroidSansFallback.ttf နဲ႔ အစားထုိးရမွာလား အကုိ
DroidSansFallback.ttf နဲ့အစားထိုးရမှာလား အကို
ကျွန်တော်တော့ myanmarmobileapp မှာတင်ပေးထားတဲ့ font changer နဲ့သုံးတာ အဆင်ပြေပါတယ်...
အင်္ဂလိပ်စာလုံးက နည်းနည်းလေး ပိုကြီးရင်ကောင်းမယ်... မြန်မာစာလုံးက ယှဉ်လိုက်ရင်ပိုကြီးနေတယ်...
Really really thanks ... My sony ericsson is now ok with that font .... Thanks ... so much ...
Alternative link from mediafire ..... for users ....
@moegyi2006,,,အခုလို ဆွေးနွေးသွားတာ ကြိုဆိုပါတယ်...စာပြန်တာနောက်ကျလို့ တောင်းပန်ပါတယ်..
ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်၊ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ် ပြောသွားကြပါ။စိတ်မဆိုးပါ။ကျနော် အပေါ်မှာ ထပ်တင်ပေးထားပါတယ်။
ဇော်ဂျီဝမ်းအတိုင်းလေးပါပဲ။sony ericsson android phones အသုံးပြုသူများအတွက်ပါ။
working on ICS or Jelly Bean?